Ukucamngca | Okufundiswa YiBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBengali IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
“Ndiya kucamngca ngayo yonke imisebenzi yakho, ndizixhalabise ngezenzo zakho.”—INdumiso 77:12.
Abanye abantu bathi umntu angacamngca ngeendlela ezininzi, ibe uninzi lwazo zisusela mandulo kwizithethe zonqulo lwaseMpuma. Omnye umbhali wathi, “Ingqondo ifanele ingabi nanto ukuze ucinge kakuhle.” Amazwi alo mbhali abonisa ukuba xa ingqondo ingenanto ngoxa ucinga ngamagama nemifanekiso ethile oko kubangela ukuba kuthi ngco ngaphakathi, ingqondo ibethwe ngumoya.
IBhayibhile ikuchaza njengento ebaluleke kakhulu ukucamngca. (1 Timoti 4:15) Noko ke, xa iBhayibhile ithetha ngokucamngca ayithethi ukuba ingqondo ifanele ingabi nanto okanye ukuphindaphinda amagama athile. Kunoko, iBhayibhile ibonisa ukuba xa ucamngca umele ube nenjongo, ucinge ngobuntu bukaThixo, ngendlela afuna sizenze ngayo izinto nangendalo yakhe. Omnye umkhonzi kaThixo wathandaza wathi: “Ndicamngce ngawo wonke umsebenzi wakho; ngokuzithandela ndihleli ndizixhalabisa.” (INdumiso 143:5) Waphinda wathi: “Ndikukhumbule esingqengqelweni sam, ebudeni bemilindo yasebusuku ndicamngca ngawe.”—INdumiso 63:6.
Ukucamngca kunokukunceda njani?
“Intliziyo yelungisa iyayicamngca impendulo.”—IMizekeliso 15:28.
Ukucamngca kuyabuphucula ubuntu bethu, kwenza sikwazi ukuzibamba, sikwazi nokuziphatha kakuhle—yaye kubangela nokuba sizilumkele izinto esizithethayo. (IMizekeliso 16:23) Ukucamngca okulolu hlobo kusenza sonwabe. Xa iNdumiso 1:3 ichaza umntu ocamngca rhoqo ngoThixo ithi: “Uya kuba njengomthi otyalwe ngakwimisinga yamanzi, onika isiqhamo sawo ngexesha lawo nonamahlamvu angabuniyo. Yaye konke akwenzayo kuya kuphumelela.”
Ukucamngca kuphucula indlela esiziqonda nesizikhumbula ngayo izinto. Ngokomzekelo, xa sifunda ngendalo okanye sifunda iBhayibhile siye sifumane izinto ezininzi ezibangel’ umdla. Xa sicamngca ngezo zinto siye sibone indlela ezifana ngayo noko besikhe sakufunda ngaphambili. Njengomchweli ohlanganisa izinto ukuze kuphume isakhiwo esihle ekugqibeleni, ukucamngca kusibangela “sihlanganise” kakuhle ulwazi esilufundileyo luze lucace ngakumbi.
Ngaba simele silumke xa sicamngca?
“Intliziyo inenkohliso kunayo nantoni na yaye iyatyhudisa. Ngubani na onokuyazi?”—Yeremiya 17:9.
“Kuba ngaphakathi, entliziyweni yabantu, kuphuma iingcinga ezimbi: uhenyuzo, ubusela, ukubulala, ukukrexeza, iinkanuko, izenzo zobungendawo, inkohliso, ihambo evakalala, iliso elinomona, . . . ukungabikho ngqiqweni.” (Marko 7:21, 22) Njengokuba silumka xa sisebenzisa umlilo, simele silumke naxa sicamngca! Ukuba asilumkanga, sinokuba neengcinga ezinokusibangela senze izinto ezimbi.—Yakobi 1:14, 15.
Ngoko ke, iBhayibhile isikhuthaza ukuba sicamngce ‘ngezinto eziyinyaniso, nezibubulungisa, nezinyulu, nezithandekayo, nekuthethwa kakuhle ngazo, nezinesidima, nezincomekayo.’ (Filipi 4:8, 9) Xa sicamngca ngezi zinto zakhayo, siya kuba neempawu ezintle, sithethe amazwi akhuthazayo, yaye sibe nobuhlobo nabanye.—Kolose 4:6.
Ifundisa Ntoni IBhayibhile Ngokucamngca?